Kule ngongoma, ndiyathemba ukuba unomdla malunga namathuba okwenza izilingo zakho zedijithali. Ukuba usebenza kwinkampani enkulu yezobugcisa, usenokwenza oku kulandelwayo ngamaxesha onke. Kodwa ukuba awusebenzi kwinkampani yobuchwepheshe, unokucinga ukuba awukwazi ukuqhuba iimvavanyo zedijithali. Ngethamsanqa, oku kuphosakeleyo: ngobuncinane kunye nokusebenza kanzima, wonk 'ubani unako ukuqhuba uvavanyo lwedijithali.
Njengenyathelo lokuqala, kunceda ukuhlukanisa phakathi kweendlela ezimbini ezibalulekileyo: ukwenza ngokwakho okanye ukusebenzisana nabanamandla. Kwaye kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo onokuzenza zona: unokuzama kwiindawo ezikhoyo, ukwakha uvavanyo lwakho, okanye ukwakha umkhiqizo wakho ukuzama ukuphindaphinda. Njengoko uza kubona kwimimiselo engezantsi, akukho nanye yale ndlela ihamba phambili kuzo zonke iimeko, kwaye kukulungele ukucinga ngabo njengeminikelo yokurhweba kunye nemilinganiselo emine ebalulekileyo: indleko, ukulawula, ukuthembeka, kunye nokuziphatha (umzobo 4.12).
Umzobo we-4.12: Isishwankathelo se-trade-offs ngeendlela ezahlukeneyo ongenza ukuba ukuzama kwakho kwenzeke. Ngendleko ndithetha iindleko kumphandi ngokwexesha kunye nemali. Ulawulo Ndithetha ukukwazi ukwenza into ofuna ngokwemigaqo-nxaxheba ogayo, engakhethiyo, beninikela unyango, kunye neziphumo yokulinganisa. Ngokwenene ndiyathetha ukuba imilinganiselo yesigqibo ifana nabo bahlanganisene nobomi bemihla ngemihla; qaphela ukuba ubuchule obuphezulu akusoloko kubalulekile ukuvavanya iingcamango (Falk and Heckman 2009) . Ngokuziphatha ngithetha ukuba ngabaphenyi abanenjongo yokulawula imingeni yokuziphatha engase ivele.